Pop Pin New September 2, 2019
ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကိုဝိုင်းရှဲပေးကြပါဦးနော် မြန်မာပြည်သူများသိအောင် များများဝိုင်းရှဲပေးကြပါဦးနော် ဒါသက်သက်ကို ယုတ်မာတာပါ …..မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် နှိပ်ချင်ကြတာက နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပါပဲ…. အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ပီး ကူညီသင့်ပါတယ်….. ဒါသက်သက်လုပ်ကြံခံရတာပါ…. ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပီး အမြင်လေးတွေ မျှဝေပေးခဲ့ကြပါအူး …. သေဒဏ်က အမြန်ဆုံး လွှတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ….poppinnew.com video credit video …
ကပ်ဆိုက်နေပြီလား မြန်မာပြည်။ ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်ကျေးရွာမှာ ပင်လယ်ရေ၀င်ရောက်နေတဲ့ (ရုပ်သံ)
ကပ်ဆိုက်နေပြီလား မြန်မာပြည်…. ရေကြီး၊ မိုးခေါင် ၊ ငလျင်လှုပ်…. မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်ကျေးရွာမှာ ပင်လယ်ရေ၀င်ရောက်နေတဲ့ (ရုပ်သံ) မြင်ရတွေ့ရတာ ကြောက်စရာကြီးပါလား …. အားလုံး ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ… သဘာဝဘေး ကပ်ဆိုးကြီးလဲ မြန်မြန်ပီးဆုံးပါစေ….။ ဘုရားတရားလဲ မမေ့ကြပါနဲ့ …။ အားလုံး သတိလေးနဲ့ နေထိုင်ကြပါ…။ ကံတရားက ပြောမရပါဖူး …။ …
ရုပ်ရည်ချောမောလှပတာဟာ ကောင်းကျိုးတွေချည်းနဲ့ ပြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ တော်တော်များများက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမယ်၊ လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေမယ်၊ ငွေရှာလည်း ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရမ်းလှတဲ့သူတွေတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပြသနာလေးတွေကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ အချစ်ရေးမှာလည်း ရေရှည်မှာအဆင်မပြေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အရမ်းလှလွန်းတဲ့သူတွေဟာ ခဏခဏ အသည်းကွဲရပါသတဲ့။ …
သိရဲ့သားနဲ့ အမှန်တရားပေါ်မလာတာဘာကြောင့်လဲ?ကမ္ဘာကြီးကဝိုင်းဝန်းမကူညီနိုင်ကြတော့ဘူးလား?မှန်တရားဆိုတာကြီးဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ? လိပ်ကျွန်း သူကြီး ခေါ် Phuket Mafia ကြီး နဲ့သူတို့ သားအဖတွေ ၊ သား အကြီးကောင် ကလည်း ကန် ချနဘူရီ မှာ အထူးချွန်ဆုံး ပြည်သူ့ ရဲ ဝန်ထပ်းကောင်းဆု ရထားတာနော် ရုံးဖွင့်ရက်ဆို ရဲလုပ်တယ် ရုံးပိတ်ရက်ဆို လိပ်ကျွန်း phuket …
တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ လူတွေပဲဗျာ… ၄ တန်းကျောင်းသူလေးကို…. 😡😡
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြေးဖို့ ကြံတဲ့ လူယုတ်မာ ၂ ဦးလက်ထဲကနေ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းဆရာမလေး ပရိသတ်ကြီးရေ ခုခေတ်ဆိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာ စက်ဆုပ်ဖွယ် မှုခင်းသတင်းတွေကို ဖတ်ရှုနေကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ခုလည်း ဘာလုပ်မယ်မှန်းမသိပေမဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီ ခရိုင် နတ္တလင်းမြို့နယ် တောင်ညိုရဲကင်းအပိုင် ဖလံပင်ကျေးရွာ အုပ်စု ဖလံပင်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ၄ တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကို သူစိမ်းယောက်ကျား …
အပတိရူပဒေသ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာပြီး၊ မြန်မာပြည်ပြန် အခြေချတော့မယ်ဆိုရင် တစ်ခြားမြို့တွေကို စဉ်းစားပါ။ ရန်ကုန်ကို ရှောင်ပါ။ ရန်ကုန်မှာ မနေသင့်တဲ့ အကြောင်း (၆) ချက်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရာသီဥတု – ရန်ကုန်ရဲ့ ရာသီဥတုက အညာဒေသထက် ဆိုးပါတယ်။ နွေမှာ ၄၀ ဒီကရီ အထက်ကို ပူတဲ့အပြင် ရေငွေ့ …
မလေးစားပဲ မနေနိုင်တော့တဲ့ စကားပြောသောဓာတ်ပုံများ
မလေးစားပဲ မနေနိုင်တော့တဲ့ စကားပြောသောဓာတ်ပုံများ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ အသတ်ခံရသော ဒေးဗစ်မီလော် နှင့် ဟာနာဗစ်တိုရီးယား တိုရဲ့မိခင် မှ ဝင်းနှင့်ဇော် တိုရဲ့ဇာတီမြေ ရခိုင်ပြည် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တောရွှာလေးတစ်ရွှာကို 2016 က အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာတာပါ။ သားသမီး ဆုံးရှုံးရသော်လည်း တစ်ဖက်က တရားခံလိုစွပ်စွဲ့ခံရသော ဝင်းနဲ့ဇော် မိခင်ကို လာရောက် နှစ်သိမ့်ပေးဖို အင်္ဂလန် ကနေလာရောက်သွားသောသူမကိုမလေးစားပဲ့မနေနိုင်ပါ။ အခုလည်း …
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ပိုင်ရှင်ရဲ့ အိမ်ကလေး
ကံကြမ္မာဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူး အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို မွန်ပြည်နယ်မှ ကျောင်းအထွေထွေလုပ်သားတစ်ဦး ဆွတ်ခူး (၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ငန်းတေးရပ်ကွက် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)က အထွေထွေလုပ်သား ဦးအုန်းသီး(ခ)ဦးကျော်မျိုးဝင်းက ဆွတ်ခူးသွား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကံထူးရှင်ဟာ (၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ရှယ်ထီ (၅)စောင်တွဲ ကနေ အက္ခရာ (ဆ) ၁၉၃၉၉၇ နံပါတ် နဲ့ …
အရင်က အရမ်းချစ်တယ်ဆိုပြီး လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
“အရင်က အရမ်းချစ်တယ်ဆို” … လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြာသောအခါ “သိပ်ချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့သူက ကိုယ့်အတွက်ရန်သူ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ သိလာ ညီမလေး? ဆင်ခြင်တတ်အောင် တင်ပေးပါတယ်။ ရည်းစားစကား အပြောခံတုံးက အပြောကောင်းတာကို “အဲဒါပဲ အချစ်စစ်” လို့ မခံယူပါနဲ့၊ အကြီးအကျယ် မှားသွားလိမ့်မယ်။ ညီမလေး ….. ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောကောင်းတာမှာ မသာယာမိပါစေနဲ့။ အပြောကောင်းတာကို …